Fitokonana Tsy Mihinan-kanina, Gazety Voasivana & Fikambanana Tsy Miankina Voarara · Global Voices teny Malagasy
Fitokonana Tsy Mihinan-kanina, Gazety Voasivana & Fikambanana Tsy Miankina Voarara
Voadika ny 10 Janoary 2018 2:33 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2006. Amin'ny teny anglisy sy farsi[Fa] ny rohy sasany ato anaty lahatsoratra)
Iraniana maro mpitoraka bilaogy no manahy momba an'i Ahmad Batebi, ilay mpianatra sady mafana fo izay mitokona tsy mihinan-kanina any am-ponja efa nandritra ny folo andro. Maro no mampitaha ny tranga mahazo azy amin'ny an'i Akbar Mohammadi, mpianatra mafana fo iray hafa izay maty tany am-ponja rehefa nitokona tsy nihinan-kanina. Mpitoraka bilaogy maro no nanoratra fa lasa i Mohammadi, tokony harovantsika ny fiainan'i Batebi. Voalohany nisamborana an'i Ahmad Batebi ilay hetsi-panoherana nataon'ny mpianatra tamin'ny 1999 ary niverenana nosamborina indray izy roa herinandro izay.
Tanisain'ny mpitoraka bilaogy sady mpanao gazety Fm Sokhan ny taratasy avy amin'ny rain'i Ahmad Batebi [Fa].
Avia ary ambarao ny heloka bevava nataonareo dia holazainay ny anay, ho hitantsika eo iza no mpanao heloka bevava. Tokony ho fantatrareo izany fa tsy irery i Ahmad Batebi, zanakalahin'i Iràna izy. Feno Ahmad Batebi i Iràna. Manàna risipo hiresaka mifanatrika aminay. Inona no hadisoanay ?
Man Iranyam, tamin'ny anjarany, dia milaza ny vadin'i Ahmad Batebi izay miezaka mafy ny hihaona amin'ny vadiny. Hoy ilay mpitoraka bilaogy :
Milaza ny vadin'i Ahmad Bateb fa efa niainantsika ny fahafatesan'i Zahra Kazemi, efa teo amintsika ny fahafatesan'i Akbar Mohammadi ary ankehitriny ratsiratsy ny fepetra misy an'i Ahmad Batebi… Misy ny milaza fa ao amin'ny toeram-pitsaboana Evin (any am-ponja) izy, ny sasany milaza fa mitokona tsy mihinan-kanina izy. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia notevatevaina sy nalaina baraka aho. Nandrahona ahy ny Ministeran'ny sampam-pitsikilovana satria nanao tafatafa momba ny vadiko aho.
Mitantara ny momba ireo mpianatra mifamory ho fahatsiarovana an'i Akbar Mohammadi i Roozmarigiha. Lazain'ilay mpitoraka bilaogy fa hafatra iray hafa ity fanoherana amin'ny alàlan'ny fifamoriana ity : andro fahenina amin'ny fitokonan'i Ahmad Batebi tsy hihinan-kanina izao ary raha tsy ahoantsika izany dia ho vavolombelon'ny heloka bevava iray hafa isika. [Fa].
Ampahatsiahivin'i Alpar ny manampahefana iraniana fa vahinin'ny Fanjakana i Akbar Mohammadi amin'ny maha-gadra azy, ary tomponandraikitra amin'ny ainy ireo manampahefana. Eo amin'ny andro fahenin'ny fitokonany tsy hihinan-kanina i Ahmad Batebi ary tsy misy olona mandre ny momba azy, hoy izy manampy. Raha tianareo ho vonoina izy dia misy fomba tsaratsara hanaovana izany ! Hoy ilay mpitoraka bilaogy, “sokafy ny masonareo, raha misy gadra iray maty dia aza lazaina fa fijanonan'ny fo no nahafaty azy “.
Singa iray entina ilazàna fotsiny ny fisamborana mpianatra mpikatroka mafana fo fa ny fahalalahana any Iràna dia ambany faneriterena bebe kokoa. Mampahafantatra antsika ny momba ireo sivana maro sy teritery bebe kokoa atao amin'ireo mpikatroka mafana fo miaro ny zon'olombalona ilay bilaogy.
Fahalalahana ambany faneriterena bebe kokoa
Bijan Saf Sara, tonian-dahatsoratra & mpitoraka bilaogy dia milaza fa voasivana ny gazetiny amin'ny aterineto, Irane Ma, ary tsy azon'ny mpisera aterineto iraniana idirana intsony. Araka ny voalazan'ilay mpitoraka bilaogy dia voasivana tamin'ny andron'ny mpanao gazety ny Irane Ma, ilay voalohany gazety amin'ny aterineto ao amin'ny firenena,. Be loatra ny tsipika mena, mainty ary volomparasy ao amin'ilay Repoblika Islamika ka na inona na inona ataonao dia mety hisolifatra ny tongotrao [Fa]… hoy ilay mpitoraka bilaogy manampy. Efa nahavoaka laharana 310 ilay gazety talohan'ny nanivànana azy.
Noraran'ny Ministeran'ny atitany Iraniana ny hetsik'ilay vondrona lehibe mpanaramaso ny fiarovana ny zon'olombelona ato amin'ny firenena izay efa-taona lasa izay no napetraky ny vondron'ireo mpisolovava. Vondrona, izay amin'izao fotoana izao dia tarihin'ilay mpikatroka mafana fo nahazo ny loka ‘Nobel’ ho an'ny Fandriam-pahalemana, Shirin Ebadi, araka ny filazan'ny haino aman-jery. Vakiantsika ao amin'ny Webgardian ny taratasy misokatra'i Shirin Ebadi mangataka fanampiana :
Ity ivontoerana ity dia mpikambana ao amin'ny federasiona iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona (FIDH) ary voasoratra ara-dalàna eto. Efa nahazo ny lokan'ny fiarovana ny zon'olombelona avy amin'ny Vaomiera Nasionalin'ny fiarovana ny zon'olombelona any Frantsa izy. Tena malaza sy atokisana ao Iràna ity ivontoerana ity. Roa andro lasa izay, dia nambaran'ny governemanta iraniana fa tsy ara-dalàna ity ivontoerana ity ary raha manohy ny asanay izahay dia hosamborin-dry zareo. Ekena, fa tsy mikasa ny hanakatona ilay foibe aho sy ireo mpikambana hafa ary dia hanohy ny hetsika fanaonay izahay. Na izany aza, dia mety hisy fepetra henjana hisamborana anay. Tsy ara-dalàna ny fihetsiky ny governemanta amin'izay lafiny izay. Noho izany, miangavy anareo amim-panajàna aho mba hanaparitaka ity hafatra ity amin'ny fomba rehetra ary hanangona tohana ara-panahy ho an'ny ivontoerantsika.
Lazain'i Aknon fa namafisin'ilay gazety mpandala ny nentindrazana Keyhan fa niaiky i Ramin Jahanbegloo, ilay filôzofy nogadraina, fa nanandrana naka ireo angom-baovao notehirizina tao amin'ny tranonkala [Fa]. Nampangaina ho mpanao gazety cybernetika i Jahanbegllo ary mifandray amin'ireo mpikatroka mafana fo amin'ny aterineto iraniana amin'ny alalan'ny yahoo sy ny Google. Nofaranan'ny Keyhan fa ny fiaiken-kelok'i Jahanbegloo dia ilaina amin'ny fandraisana fanapahankevitra manokana na eo aza ireo vaomiera manokana hiadiana amin'ireo heloka bevava mifandraika amin'ny aterineto. Heverin'ilay mpitoraka bilaogy fa tsy voahevitra io karazana lahatsoratra sy vaovao io. Hoy izy :
Inona no dikan'ny hoe mpikatroka mafana fo amin'ny yahoo na Google ? Mety mijery imailaka any amin'ny Yahoo na ny google ireo mpikatroka mafana fo ireo. Inona ny dikan'ny hoe mpanao gazety cybernetika ? hoy izy nanampy.
4 andro izayAmerika Latina
Tatitry ny Greenpeace manasongadina ny fitaran'ny fanarian'ireo firenena eorôpeàna ny fakony any Tiorkia
Jona 2021 24 Lahatsoratra